बसन्त चौधरी भन्छन- नेताले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण म दिन्छु तर मैले देश छोड्नुपर्ने हुनसक्छ ! - itnewsnepal
बसन्त चौधरी भन्छन- नेताले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण म दिन्छु तर मैले देश छोड्नुपर्ने हुनसक्छ !
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री भएदेखिनै आफूपनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने कुरा दोहोर्याउँदै आएका छन्। ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मुखबाट पटकपटक सुनिदै आएका शब्द हुन यी। तर, देशमा कोरोना महामारीका बीच पनि भ्रष्टाचार भएको, यसमा सरकारकै उच्च ओहोदाका मन्त्रीहरु संलग्न भएको आरोप लाग्दै आएको छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा होस् वा सरकारी खर्चका कुरामा जताजतै भ्रष्टाचार भएको गुनासोका बीच केही समयअघि युवाहरु बालुवाटारमै प्रदर्शनमा उत्रेका थिए।
तर, यसो गरिए बापत आफूलाई देशबाटै लखेनिटने डर रहेको पनि उनले बताए। देशको निम्ती त्यो कुरा पनि स्वीकार्य रहेको चौधरीले बताएका छन्। सामाजिक सञ्चालमा यो भिडियो क्लिप पछिल्लो समय भाइरस भइरहेको छ। वसन्त चौधरीले भनेका कुरा ‘आरोप’ भन्दा बढी ‘तथ्य’ लाग्छन् । छानबीन होस् । उद्योगपति चौधरीको कुरालाई लिएर राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ट्विटमा मेन्सन गर्दै आफ्नो कुरा पुष्टि गर्न आग्रह गरेका छन्। उद्योगी चौधरीले आफ्नो कुरालाई राजनीतिकरण नगर्न थापालाई आग्रह गरेका छन्।